IOS 10 beta 2 iphucula ubomi bebhetri ngaphezulu kwe-beta 1 | IPhone iindaba
Iindaba ze-IPad | | iOS 10, Izaziso
Kwiveki ephelileyo, uApple ukhuphe i-beta 2 ye-iOS 10 kwaye wayenza yafumaneka kubaphuhlisi, ngento ebonakala ngathi ikwayiloo nto yapapashwa yenziwa yafumaneka eluntwini. abavavanyi mva evekini. I-beta yesibini yayo nayiphi na inguqulelo ye-iOS ngokubanzi ithathwa njengengcono kunenguqulo yokuqala kuluhlu olubanzi lwezizathu. Enye yazo kukuphucula ukusetyenziswa kwebhetri. Umahluko phakathi kwebetas yesibini neyokuqala inokuba bubundlobongela xa kufikwa ekusebenziseni amandla.
Ngoku le Beta 2 ipapashiwe kwaye iyafumaneka kuye nawuphina umntu, a YouTube uthathe isigqibo sokuyibeka kwiimvavanyo ezahlukeneyo ukuthelekisa ubomi bebhetri ngokubhekisele kwi-Beta 1 kananjalo ngokubhekisele kuhlobo lwangoku lwe-iOS: iOS 9.3.2. Njengomphathi wenguqulo nganye, usebenzise iimodeli ezahlukeneyo ze-iPhone. Singatsho ukuba iziphumo zilindelwe ... nangona sikwafumana ezinye iziphumo ezingalindelekanga.
Njengoko besinokulindela, i-iOS 2 iBeta 10 ibonakala iyinguqulelo esebenzisa amandla ngokufanelekileyo ngakumbi kunangaphambili, i-beta 1. Le nyaniso ayimangalisi mntu kuko konke esixoxe ngako kwaye, nangaphezulu, kwixesha elincinci elichithwe ngu-Apple ukuyisebenzela iBeta 1, ngokolwazi esilwazile ukubonisana ngalo. Ke ngoko, ukuba uyifakile le nguqulo yokuqala kwaye unengxaki nebhetri, i-beta yesibini ye-iOS 10 inokuwuphucula lo mbandela.
Mhlawumbi into engacacanga inokuba inyani yokuba i-iOS 10 beta 2 ibonakala isebenza ngokufanelekileyo ngakumbi ngebhetri kune-Apple's version, iOS 9.3.2. Inyani yokuba i-beta ilawula ibhetri yefowuni ibhetele kunenguqulo ezinzileyo kunye nokusetyenziswa kwe-iOS isitsho kakhulu ngokuxhasa le beta.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iOS » iOS 10 » IOS 10 beta 2 iphucula ubomi bebhetri ngaphezulu kwe-beta 1
UDaniel Ciporkin sitsho
Mholo. Kwimeko yam i-Ipad air 2 ene-beta kawonke-wonke ye-10, ibhetri idonsa ngokukhawuleza, ii-APP ezininzi azisebenzi. azilungiselelwanga. Ityala likaSkype kunye neOfisi. Ndiyathemba ukuba baya kuphucula okanye ndiza kubuyela kwi-9.3.3 beta 5.
Phendula kuDaniel Ciporkin
Uhlalutyo lwevidiyo ye-beta yokuqala kawonkewonke ye-iOS 10